အခမဲ့ Webinar Tool နှင့် Live Streaming ပလက်ဖောင်း ULIVE
အခမဲ့ webinar tool ကို
U LIVE သည် webinars နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ပြပွဲများအတွက်လူကြိုက်များသော live streaming platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်သွားပါ၊ ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဝေမျှပါ၊ အမြင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပိုက်ဆံရှာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ပို့စ်ကိုမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါ
သင့်အားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အခကြေးငွေပေးရမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ င်ငွေကိုတတိယပါတီများနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
ULIVE သည် Cross-platform ဖြစ်သည်
ဒီ app သည် Desktop, Laptop, Tablet နှင့် Smartphone များအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုထိရောက်စွာရောက်ရှိ!
သင်၏ပရိသတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ လူကြိုက်များ။ ကြည့်ရှုသူများတိုးပွားစေရန်အခမဲ့နှင့်အသုံး ၀ င်သောအကြောင်းအရာအချို့ကို ဦး စွာထုတ်ဝေပါ။ သင်၏ပရိသတ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ငွေရှာရန်တိုက်ရိုက်သွားပါ။
တိုက်ရိုက်သွားပြီးအဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်သင်၏ stream ကိုသီးသန့်ဖြစ်စေပါ။ မိနစ်တိုင်းအတွက်ငွေပေးချေပါ။
သင်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများနှင့် passive ဝင်ငွေကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများအားလုံးသည်သင့်အားကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်းသင့်ကိုပိုက်ဆံပေးသည်။
သင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတိုက်ရိုက်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းလိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Presets အားလုံးတွင်သင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်။
အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့အားအကြွေစေ့များပို့ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံး streamers များကိုကျေးဇူးတင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများနှင့်မလိုအပ်ပါ။ ခင်ဗျားအသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီ၊
U LIVE သည်ယခုအချိန်အထိဘာသာစကား (၁၂) ခုကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ဒီ app ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၂၅၁ နိုင်ငံမှာအသုံးပြုပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ချက်၊ ရုရှား၊ တူရကီ၊ ဂျပန်၊ ဟီဘရူး၊ အာရဗီ၊
သင်၏ပထမဆုံး live stream ကိုယခုစတင်လိုက်ပါ၊ ၎င်းသည်လွယ်ကူပါသည်။
အိမ်ရှင်အဖြစ်စာရင်းသွင်းပါ - လွယ်ကူပါသည်!
webinars အပေါ်ဝင်ငွေ တစ် ဦး Affiliate ဖြစ်လာသည် အခြားရွေးချယ်စရာများ Periscope အခြားရွေးချယ်စရာ
ဦး LIVE ကိုရယူပါ